Umbuzo: Akukho sandi siphuma emva kokuba i-microphone ye-2.4G ixhunyiwe, kwaye isandi sekhompyutheni siqhelekileyo
Impendulo: 2.4 Imakrofoni ithulisiwe, cofa "Imenyu" ukukhulula isimumu, umsebenzi uqhelekile.
Umbuzo: Isixhobo se-USB asinakubonwa
Impendulo: Ukuba intambo ye-USB ayixhunyiwe, ikhululekile okanye iyawa, yidibanise kwakhona; ukuba ibhodi ye-USB-HUB icinyiwe okanye yonakele, yibuyisele kwaye uyixhume kwakhona; ukuba izikhonkwane zojongano lwe-USB zonakele, buyisela ibhodi yojongano ngqo ngqo
Umbuzo: Isixhobo se-USB asinakusetyenziswa
Impendulo: 1. Qinisekisa ukuba umqhubi wesixhobo se-USB ufakiwe, faka kwakhona umqhubi okanye uqhagamshele isixhobo se-USB kwezinye iimvavanyo, kwaye uqinisekise; kungenjalo, buyisela USB-HUB. Ukuya
2. Qinisekisa ukuba i-USB-HUB kunye nezixhobo ze-USB ziqhelekileyo okanye azifumaneki, kwaye ubuyisele inkqubo.
Q: Akukho sandi esivela kwiVGA okanye kwi-HDMI ephumayo
Impendulo: Jonga ukuba unxibelelwano nesixhobo sangaphandle sichanekile
Umbuzo: Akukho mpendulo xa ucofa iqhosha lamandla, isibane asilayiti, kwaye yonke inkqubo ayivuli amandla.
Impendulo: 1. Khangela ukuba umgca wegalelo lombane uqhagamshelwe kakuhle, ingaba iswitshi yesokhethi yamandla ivuliwe, kwaye uqinisekise ukuba umgca wombane unamandla.
2. Vula ikhava ephezulu yomatshini, khangela ukuba intambo yokuchukumisa ixhunyiwe ngokukhululekileyo, kwaye usebenzise i-DC gear kwi-multimeter ukulinganisa "i-5V, i-GND" kwipaneli yokuchukumisa ukuze ubone ukuba kukho umbane we-5V. Ukuba unikezelo lwamandla lwe-5V aluvulwa, buyisela indawo yokuthintela; Ukuba akukho 5V, buyisela unikezelo lwamandla.
3. Ukuba umbane weplug-in utshintshwa, kodwa awunako ukuvulwa, buyisela ibhodi engundoqo yesilawuli.
Umbuzo: Kukho imigca emi nkqo okanye imivumbo ngasemva
Impendulo: 1. Khetha ulungiso oluzenzekelayo kwimenyu;
2. Lungisa iwotshi kunye nesigaba kwimenyu
Umbuzo: Ukubekwa kwebala lokungachanekanga
Impendulo: 1. Sebenzisa inkqubo yokubeka ukujonga ukuba iqhagamshelwe;
2. Khangela ukuba ngaba inkqubo ye-WIN yokuzilinganisa iprogram isetyenziselwa ukulinganisa, ukuba kuyimfuneko, icacile; sebenzisa inkqubo ekhethekileyo yokufumana indawo; 3. Jonga ukuba usiba lokubhala lujonge kwiscreen na
Q: Umsebenzi wokuchukumisa awusebenzi
Impendulo: 1. Khangela ukuba ngaba umqhubi we-touch ufakiwe kwaye uyasebenza kwi-host computer; 2. Jonga ukuba ubungakanani bento echukumiweyo bulingana nomnwe; 3. Khangela ukuba intambo ye-USB yesikrini iqhagamshelwe ngokuchanekileyo; 4. Khangela ukuba intambo yesikrini sokuchukumisa inde kakhulu. Ukuthotywa kokudluliselwa komqondiso
Umbuzo: Ikhompyuter ayivulwa
Impendulo: Ulawulo oluphakathi luvulwa ngokuqhelekileyo, khangela ukuba intambo yamandla ikhululekile okanye iyawa, ingaba intambo yamandla ekhompyutheni idibaniswe ngokufanelekileyo, kwaye uphinde udibanise intambo yamandla ekhompyutheni kwakhona.
Q: Ikhompyuter iqala kwakhona ngokuphindaphindiweyo
Impendulo: Phinda ufake imodyuli yememori, ukhuphe i-motherboard, susa ibhetri yeqhosha, ujikeleze ngokukhawuleza izibonda ezilungileyo kunye nezibi kwi-motherboard ngentsimbi ye-3-5 imizuzwana, uyidibanise kwakhona, kwaye uyifake kunye ne-boot; emva kwendlela engentla, kuyimfuneko ukuqalisa kwakhona ngokuphindaphindiweyo. Qwalasela i-motherboard yekhompyuter kunye nemiba yonikezelo lwamandla ekhompyuter.
Umbuzo: Isignali ekhawulezileyo iphumile kuluhlu kwimo yekhompyutha
Impendulo: 1. Khangela ukuba isiboniso sibekwe ngokuchanekileyo na; 2. Khangela ukuba ingaba isisombululo sesona sisombululo na; 3. Lungisa ungqamaniso lomgca kunye nongqamaniso lwendawo kwimenyu
Umbuzo: Ikhompyuter ayinakuqalwa, isibane samandla ekhompyuter sicinyiwe okanye asiqhelekanga
Impendulo: Misela ngokuthe ngqo ikhompyuter ye-OPS ukuvavanya. Ukuba isasilela ukuqalisa, buyisela umbane weplagi kunye nenqwelomoya ephakathi yolawulo.
Umbuzo: Inkqubo yekhompyutha ayikwazi ukubonisa okanye ukuqalisa ngesiqhelo
Impendulo: 1. Xa uqala kwi-desktop, ikhuthaza "usetyenziso lwenkqubo", kwaye ingena kwidesktop ngesikrini esimnyama. Kule meko, inguqulo efakwe ngaphambili yenkqubo yokusebenza iphelelwe yisikhathi, kwaye umthengi uvula inkqubo ngokwakhe; 2. Emva kokuqalisa kwimodi yokulungisa, iyavela kwaye ayikwazi ukulungiswa. Qala kwakhona kwaye ucinezele ikhibhodi "↑↓", khetha "ukuqalisa okuqhelekileyo", ingxaki isonjululwe; umsebenzisi kufuneka avale ngokuchanekileyo Le ngxaki inokuthintelwa. 3. Xa ikhompyutha ivuliwe kwaye ingena kwi-icon ye-win7, iphinda iqalise ngokuphindaphindiweyo okanye iqala isikrini esiluhlaza. kwaye ucofe iqhosha elithi "Del" ukungena kwi-BIOS, tshintsha imowudi yediski enzima, tshintsha ukusuka kwi-"IDE" ukuya kwi-"ACHI" imo okanye ukusuka ku-"ACHI" ukuya ku-"IDE" 4. Inkqubo ayikakwazi...
Umbuzo: Umatshini awukwazi ukudibanisa kwi-Intanethi, i-port yenethiwekhi ibonisa "X" okanye iphepha lewebhu alinakuvuleka
Impendulo: (1) Qinisekisa ukuba umsebenzi womnatha wangaphandle uqhagamshelwe na kwaye uyakwazi ukusefa i-Intanethi, njengokusebenzisa ilaptop ukuvavanya (2) Khangela ukuba umqhubi wekhadi lenethiwekhi ufakwe kumphathi wesixhobo (3) Jonga useto lwenethiwekhi jonga ukuba ichanekile (4) Qinisekisa ukuba isikhangeli sichanekile ukuba sichanekile, akukho ntsholongwane, ungayilungisa ngezixhobo zesoftware, ujonge kwaye ubulale intsholongwane (5) Buyisela inkqubo, faka kwakhona umqhubi ukusombulula le ngxaki (6) ) Faka esikhundleni i-motherboard yekhompyutha ye-OPS
Umbuzo: Umatshini usebenza kancinci, ikhompyuter ibambekile, kwaye isoftware yebhodi emhlophe ayinakufakwa.
Impendulo: Kukho intsholongwane kumatshini, kufuneka ubulale intsholongwane okanye ubuyisele inkqubo, kwaye wenze umsebenzi omhle wokhuseleko lokubuyisela inkqubo.
Umbuzo: Isixhobo asikwazi ukuvulwa
Impendulo: 1. Jonga ukuba kukho umbane; 2. Khangela ukuba ifowuni ivuliwe kwaye isalathisi sombane sibomvu; 3. Khangela ukuba isalathisi senkqubo sibomvu okanye siluhlaza, kwaye ingaba imowudi yokugcina amandla ivuliwe.
Umbuzo: Le vidiyo ayinamfanekiso kwaye ayinasandi
Impendulo: 1. Khangela ukuba umatshini uvuliwe; 2. Khangela ukuba ngaba umgca wesignali uplagiwe kwaye ingaba umthombo wesignali uyahambelana; 3. Ukuba ikwimowudi yekhompyuter yangaphakathi, khangela ukuba ikhompyuter yangaphakathi ivuliwe
Umbuzo: Umsebenzi wevidiyo awunambala, umbala obuthathaka okanye umfanekiso obuthathaka
Impendulo: 1. Lungisa ichroma, ukukhanya okanye umahluko kwimenyu; 2. Khangela ukuba umgca wesignali uqhagamshelwe ngokufanelekileyo
Umbuzo: Umsebenzi wevidiyo unemigca ethe tye okanye ethe nkqo okanye ijita yomfanekiso
Impendulo: 1. Khangela ukuba umgca wesignali uqhagamshelwe ngokufanelekileyo; 2. Khangela ukuba ngaba ezinye izixhobo ze-elektroniki okanye izixhobo zombane zibekwe ecaleni komatshini
Umbuzo: Iprojektha ayinasibonisi somqondiso
Impendulo: 1. Khangela ukuba iziphelo ezimbini zentambo yeVGA zikhululekile, ukuba i-wiring yeprojekti ichanekile, kwaye i-terminal yokufakelwa kufuneka iqhagamshelwe; ingaba umjelo womqondiso uhambelana nomjelo wocingo; indawo yolawulo ephakathi ikhetha itshaneli "PC". 2. Sebenzisa imonitha elungileyo ukudibanisa ngokuthe ngqo kwi-VGA port ye-OPS yekhompyutheni ukuze ubone ukuba kukho imveliso yesignali. Ukuba akukho mqondiso, buyisela ikhompyutha ye-OPS. Ukuba kukho umqondiso, faka inkqubo nqakraza-ekunene "IiPropati" kwaye ubonise ukuze ubone ukuba iimonitha ezimbini zichongiwe. Kwiimonitha ezimbini, buyisela i-motherboard yolawulo oluphakathi okanye i-backplane yolawulo oluphakathi; ukuba kukho imonitha enye kuphela, buyisela ikhompyuter ye-OPS.
Umbuzo: Isiginali yokubonisa iprojektha ayiqhelekanga
Impendulo: 1. Isikrini asiboniswanga ngokupheleleyo, iimpawu zedesktop aziboniswa okanye azilungiswanga ngokupheleleyo kwisisombululo esifanelekileyo okanye inkqubo ibuyiselwe (xa ikhompyutha iqala, cofa iqhosha elithi "K" ukukhetha inkqubo yokubuyisela) 2. Isikrini sifakwe umbala okanye isikrini simnyama. Khangela ukuba intambo yeVGA ilungile, idityaniswe kakuhle, kwaye umsebenzi weprojektha uqhelekile; ukuba intambo yeVGA kunye neprojektha ziqhelekile, qhagamshela ngqo kujongano lweVGA lwekhompyuter yeOPS. Ukuba umboniso uqhelekile, buyisela i-backplane yolawulo oluphakathi kunye nebhodi yomama; ukuba ayiqhelekanga, buyisela ikhompyuter ye-OPS.
Umbuzo: Umfanekiso awunawo umbala kwaye umbala awulunganga
Impendulo: 1. Khangela ukuba iVGA kunye neentambo ze-HDMI azixhunyiwe kakuhle okanye zineengxaki zomgangatho; 2. Lungisa ichroma, ukukhanya okanye umahluko kwimenyu
Q: Bonisa ifomathi engaxhaswanga
Impendulo: 1. Khetha ulungiso oluzenzekelayo kwimenyu; 2. Lungisa iwotshi kunye nesigaba kwimenyu
Umbuzo: Ulawulo olukude luyasilela
Impendulo: 1. Jonga ukuba ngaba kukho nawuphi na umqobo phakathi kweremote control kunye ne-TV remote reception end receiveing ​​end; 2. Jonga ukuba i-polarity yebhetri ekwiremote control ichanekile; 3. Jonga ukuba isilawuli kude sifuna ukubuyisela ibhetri
Umbuzo: Iqhosha elinye alikwazi ukulawula iprojektha
Impendulo: (1) Umthengi akayibhalanga ikhowudi yolawulo yeprojekti RS232 okanye ikhowudi ye-infrared, kwaye ubeke isibane se-infrared kwindawo apho iprobe ye-infrared yeprojektha inokufunyanwa. Bhala ikhowudi kwaye ukhangele ukuba umgca wokulawula uxhunyiwe ngokufanelekileyo. (2) Emva kokumisela iiparamitha ezisisiseko, isenzo solawulo esisembindini sokutshintsha kufuneka sikhethwe sonke, siphawulwe ngo "√", kwaye ubhale iiparamitha ezisisiseko. (3) Cwangcisa ixesha lokuthumela ikhowudi, ixesha lokulibazisa, kunye nexesha lokucima umbane lokutshixa umbane.
Umbuzo: Isithethi somsebenzi wesandi sinesandi esinye kuphela
Impendulo: 1. Lungisa ibhalansi yesandi kwimenyu; 2. Khangela ukuba ngaba itshaneli enye kuphela ebekiweyo kwiphaneli yokulawula isandi sekhompyutha; 3. Jonga ukuba intambo yomsindo iqhagamshelwe ngokuchanekileyo na
Umbuzo: Umsebenzi wesandi unemifanekiso kodwa akukho sandi
Impendulo: A: 1. Khangela ukuba iqhosha lesimumu licinezelwe na; 2. Cinezela ivolumu +/- ukulungisa ivolumu; 3. Jonga ukuba intambo yomsindo iqhagamshelwe ngokuchanekileyo na; 4. Jonga ukuba ifomathi yesandi ichanekile